Xiisadda u dhaxeysa Turkiga iyo Giriiga oo cirka isku shareertay | Somaliland Mirror
Home WARARKA Xiisadda u dhaxeysa Turkiga iyo Giriiga oo cirka isku shareertay
adminAug 13, 2020WARARKA0
Xukuumadda Giriiga ayaa ugu baaqday Turkiga in uu dib ugala baxo Markab ka soo ambabaxay dekad ku taalla Turkiga kaasi oo sahan qodid shidaal ka samayn doona bariga badda Mediterranean-ka.
Markii xukuumadda Turkiga ay bishii July ku dhawaaqday in Markab baaritaan shidaal sameeya ay jasiiradda Kastellorizo, ayaa waxaa murankii ka dhashay markii hore xalisay dowladda Jarmalka oo imika haysa jagada madaxwaynaha Midowga Yurub.
Balse imika markii uu markabka Turkiga oo ay weheliyaan 5 markab oo kale ayaa waxaa mar kale soo cusboonaaday muranka.
Labadan dalka oo ka wada tirsan gaashaanbuurta Nato ayaa waxay is waydaarsadeen hadalo dhiilo xambaarsan.
Dowladda Giriiga ayaa wacad ku martay inay difaci doonto madaxbanaanideeda islamarkana midowga Yurub oo ay Gariiga xubin ka yihiin ayaa wadaxaajood ku baaqay.
Siduu u xumaaday xiriirka?
Turkiga iyo Giriiga ayaa ku loolamaya keydka Gaas islamarkana waxay isku khilaafsan yihiin cidda xaqqa u leh goobo muhiim ah oo ku yaalla bariga badda Mediterranean-ka .
Waxay ku muransan yihiin goobo cayiman oo dal walba uu sheeganayo inay dhulkiisa ka tirsan yihiin.
markabka Oeis shipruc
Markii ay Turkiga digniinta bixiyeen kama uusan soo shiraacan dekadda Turkiga ee Antalya.
Balse digniintaasi ayaa markiiba sababtay in milatariga Giriigga heegan sare la galiyo, waxaana bilaabatay cabsida laga qabo in uu isku dhac ka dhaca meel u dhaw jasiiradda Kastellorizo.
Xiriirka u dhaxeeya Turkiga iyo Giriigga ayaa muddo bilooyiin ah waxaa uu ahaa mid wiiqmay.
Labada dal waxyaabaha kale ee ay ku muransanayeen waxaa ka mid ahaa muhaajiriinta ka soo gudbiyo dhanka Turkiga ee u soo talaabaya Giriigga.
Giriigga ayaa sidoo kale aad uga naxay ka dib markii madxafkii Hagia Sophia ee ku yaalla Istanbul loo badalay masaajid.
Waxay labada dhinac mujiyeen inay ka go’an tahay wadaxaajood ka dib markii Jarmalka ay soo faragaliyeen islamarkana dagtay xiisadda labada dal.
Balse horraantii bishan August Giriiga ayaa waxay heshiis dhanka badda la galeen Masar taasi oo Turkiga ka careysiisay.
Wadahadaladii ayaa la baajiyay islamarkana waxaa 10 August dekadda ka soo shiraacday markabka Oruc Reis.
Maalinkii xigtay markabka Oruc Reis ayaa la sheegay in uu joogay biyaha u dhaxeeya jasiiradaha Crete iyo Qubrus.
Markabka Shidaalak qoda ee Turkiga
Maxaasoo cusboonaysiiyay xiisadda?
Maxay yihiin arrimaha sharciga ee ku xeeran?
Qaar badan oo ka mid ah jasiiradaha Gariiga ee ku yaalla Aegean iyo bariga Mediterranean-ka ayaa waxay u jiraan xeebta Turkiga masaafi aad u dhaw, islamarkana muranka la xiriira biyaha waa mid adag labada dal-na dhowr jeer ay ku sugteen inay dagaalamaan.
Haddii Giriiga ay isku soo ballaariyaan 6 mayl dhanka xeebta , Turkiga ayaa ku andacoonaya in badooda ay arrintaasi saamayn ku yeelanayso.
“Turkiga ma aqbali doono qorsha kasta oo la isku dayayo in lagu soo xiro biyaheeda,” waxaa sidaasi sheegay madaxwaynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan.
Markabka shidaalka qoda ee Turkiga waxaa la socda maraakiib dagaal
Maxay yihiin jawaabaha laga bixiyay?
Wadamada Yurub ee xulufada la ah gariiga ayaa waxay taageereen go’aanka Giriiga inkastoo dalalka kale ee Yurub sida Jarmalka ay ku baaqayaan wadaxaajood.
Madaxwaynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa taageero buuxda u muujiyay Gariiga iyo Qubrus , wuxuuna cambaareeyay “jabinta la jabiyay madaxbanaanidooda”.
Xiriirka u dhaxeeya Turkiga iyo Faransiiska ayaa ahaa bilooyiinkii ugu dambeeyay ahaa mid murugsan , gaar ahaan arrinta Liibiya.
Mareykanka ayaa labada dhinac ugu baaqay in ay wadahadlaan islamarkana xoghayaha guud ee Nato Jens Stoltenberg ayaa dhankiisa ku baaqay in arrintani “la xaliyo iyada oo la eegay is xulufeysiga laguna saleynayo shuruucda caalamiga ah.
Previous PostXanta Suuqa Kala iibsiga Ciyaartoyda ee Maanta Next PostGolaha Wasiirrada Somaliland Oo Go'aamiyey In Maxkamadda Sare Loo Gudbiyo Go'aan-ka-gaadhista Doorashooyinka